Hausi Sexy, Zvino Chii? | Martech Zone
Isu takamboita kuti mumwe munhu atiudze isu isu, kana kuti zvodii zvedu fomu yekuvaka application, yakanga isiri "seksikäs". Mune dzimwe nzira ndinofungidzira kuti munhu iyeye anga achitaura chokwadi. Mafomu, pachawo haana kuita seksikäs, asi kune vanhu vanoashandisa uye vanovimba navo kuti vaunganidze data, ivo, kana asiri anonakidza, vakanyanya kushata.
Saka iwe, muridzi webhizinesi, mushambadzi, nezvimwe, une chigadzirwa kana sevhisi isiri "sexy" unozviita sei "seksikäs"? Hedzino nzira shoma.
Udza Nyaya Yemutengi Wako: Mikana ndeyekuti une mamwe makambani anonakidza achishandisa sevhisi yako kana chigadzirwa. Gadzira nyaya dzenyaya. Rega vatengi vashanyi kutumira pane yako blog, ita vhidhiyo kubvunzurudzwa navo uye uzvitumire pane ako masocial network. Svitsa kune mabloggi munzvimbo yako nenyaya yavo, kubudirira kwavo. Nekutarisa pane inotonhorera uye yekuvandudza mashandisiro echigadzirwa chako unoiita kuti ive inonakidza zvikuru uye kuvhura nzira nyowani dzekuti vanhu vataure kana kunyora nezvako.
Vhura Iyo Hood: Une tekinoroji inonakidza here kutyaira bhizinesi rako? Wakagadzira yakasarudzika system yekubatsira kushandisa rako bhizinesi? Mikana ndeyekuti bhizinesi rako rine chimwe chinhu chakasarudzika chinotyaira (kana iwe haungabudirire). Simbisa zvakasarudzika zvebhizinesi rako uye upe vanhu peek kuseri kweketeni. Zvingangodaro kuti ichi chichava chinhu icho vangangove vatengi kana nhengo dzenhau dzingawane dzinonakidza.
Rega Vatengi Vako Vakuitire Bhidha Yako: Izvi zvakati siyanei pane yekutanga. Runako rwemasocial network ndechekuti inobvumira vatengi vako kutaura nezvako. AtFormstack isu tinoongorora zvinotaurwa nevanhu nezvedu pa Twitter. Panzvimbo pekungochengeta zvese izvo zvakanaka zvinhu kwatiri isu takagadzira a Twall of Fame Isu takadhinda uye takagadzira aya maTweets akanaka ndokuaisa munzira yemahofisi edu. Isu takavadzokororazve uye takatumira mamwe ma tweets kubva kumadziro pane yedu Facebook peji uye yedu blog. Izvi zvakaita kuti vanhu vataure nezvedu zvakare uye vakanyengera vamwe vevanhu vakanyora iwo mavambo ekutanga kuti vatumirezve ma tweets edu. Iyo inogadzira mufaro pamusoro pechako uye chigadzirwa chako nekuti chiri kuuya kubva kune chaicho vashandisi vebasa rako. Zvinoita kuti vatengi vako vataure nezvako, vachiudza shamwari dzavo kuti uri "seksikäs" sei uye nei vachikuda.
Kungoti nekuti hauna gadget inopenya kana chinonyanya kufarirwa pasocial network application hazvireve kuti bhizinesi rako harinakidze. Chera zvakadzika zvishoma kupfuura pamusoro uye uone zvichaita kuti vanhu vataure. Mikana yekuti haufanire kuchera zvakadzika.
Tags: mutengi nyayaformstackkutaura nyaya
Mbudzi 20, 2009 na6: 49 PM
Ini ndinofunga 'Kwete Sexy' ingori bheji rerukudzo muno muIndiana. Mazhinji emakambani pano anoita mafomu asiri akanyanya kushevedzera… asi anoshanda. Ivo vakachengeteka, vanoyera, vanoita izvo izvo vatengi zvavanoda kuti vaite. Sexy rakakura kana iwe uchitsvaga zuva, asi iri bhizinesi!
Mbudzi 20, 2009 na6: 23 PM
Iwe unogona zvakare kuwedzera mufaro weumwe munhu anonyatsoona iyo "sexiness" yezvaunoita. Iye angave ari mutengi, mushandi, indasitiri mudiwa, kana mumwe munhu zvachose.
Ini ndaive nemudzidzisi wecalculus uyo akaburitswa zvinoshamisa nezvekuti masvomhu aishanda sei. Aiisa equations uye madhayagiramu pabhodhi uye otobhabhatidza nemufaro nekunaka kwese kwaive. Aive nekunyemwerera kwemwana mangwanani eKisimusi. Dai iwe uri mukamuri naye waisakwanisa kubatsira asi kuona humwe hwekunaka muhukama pakati penhamba. Kushingairira kwake kwaipararira. Akaita calculus seksikäs.
Mbudzi 20, 2009 na6: 51 PM
Clay yakanaka poindi uye ini ndinobvumirana. Iko kunakidzwa, kushuvira, mumwe munhu ane chigadzirwa kana kambani inogona kunyatso kuverengerwa. Nekudaro, ini handina chokwadi chekuti ndaigona kuzoona hupombwe mucalculus!